Miyay Barcelona Ciyaarsiin Doontaa Lionel Messi Kulanka Muhiimka Ah Ee Valencia? Akhriso Xogtii Ugu Dambaysay Ee Laga Helay. - Gool24.Net
Miyay Barcelona Ciyaarsiin Doontaa Lionel Messi Kulanka Muhiimka Ah Ee Valencia? Akhriso Xogtii Ugu Dambaysay Ee Laga Helay.
Kooxda Barcelona iyo tababaraheeda Ernesto Valverde ayaa lagu soo warramayaa inay gaadheen go’aanka haddii kabtanka kooxdooda ee Lionel Messi ay ku ciyaari doonaan kulanka muhiimka ah ee ay La Liga soo dhawayn doonaan kooxda Valencia.
Sugitaankii ahaa in Lionel Messi uu kulankiisa ugu horreeya xilli ciyaareedkan matalo Barcelona ayaa la filayaa inuu sii dheeraan doono maadaama oo uusan qayb ka qaadanayn kulanka Valencia sida uu sheegayo wargeyska Sport.
Messi ayaan wali si dhammaystiran uga soo kabanin dhaawacii horraantii xilli ciyaareedkan ka gaadhay kubka isaga oo aan ilaa haatan kusoo laaban tababarka buuxa ee kooxdiisa.
Dhaawacan oo ah mid Messi gaadhay 5-tii bishii August ee sanadkan ayaa markii hore lagu sifeeyay mid aan weyneyn balse xiddigan ree Argentina ayaan tababarka raaxo ku qaadan tan iyo wakhtigaas.
Iyadoo haatan ay xiddigaha kale ee Barcelona ku maqan yihiin waajibaadkooda qaran, Messi ayaa wakhtigiisa u huray mudada ay maqan yihiin tababar qaadasho iyo sidii uu kusoo kaban lahaa.
Haatan haddii uu seego kulanka Valencia fursada kale ayaa ah ciyaarta furitaanka Group-yada ee ay booqanayaan Borussia Dortmund isagoo haddii uu kulankaas qudhiisa seego ugu horreyn soo laaban doona 21-ka bisha.
Messi oo kaliya ayaan ahayn ciyaartoyga dhibanaha u ah dhibaato dhaawac oo kubka ah balse waxa sidoo kale isla dhibaatadaas oo kale ku maqan Luis Suarez walow uu isagu Messi kaga dhaw yahay soo laabashada.